शिक्षक सम्पत्ती विवरण :‘भर्नुपर्ने कितावखानाको नम्बर, भर्छन् सञ्चय कोषको नम्बर!’ | नुवागी
शिक्षक सम्पत्ती विवरण :‘भर्नुपर्ने कितावखानाको नम्बर, भर्छन् सञ्चय कोषको नम्बर!’
– हरिसुन्दर छुकां/ काठमाडौं २६ भदौ । ‘के तपाइँले सम्पत्ती विवरण भर्नुभयो ? अनि भरेको विवरण किताबखानामा पुग्यो कि छैन ?’
‘भर्नुभएको छैन भने, नहतारिनुस्, विस्तारै भर्नुस्, किनभने हतारमा विवरण भर्दा बिग्रिन सक्छ । जसको कारण फारम भर्दा भएको गल्तीले पनि तपाइँ जरिवानामा पर्न सक्नुहुन्छ । विवरण भरिरहँदा समयको पनि ख्याल गर्नुस् किनकि सम्पत्ती विवरण भर्ने समय मात्र दुई दिन बाँकी छ । समयभित्र भरिएन भने पनि पक्कै पनि जरिवानाको भागिदार बन्नैपर्छ ।
प्रत्येक आर्थिक बर्षमा बुझाउनु पर्ने आफ्नो सम्पत्ति बिवरण बुझाउनका लागि सरकारले दुई महिनाको समय दिने गरेको छ । त्यो बीचमा फारम भरे पनि कतिपय शिक्षकको नामावली भने विवरण नभरेकोमा देखिने गरेको छ । यसको कारण अरु नभएर स्वयम् शिक्षक नै रहेको किताबखानाका उपनिर्देशक रवीन्द्र बुढाप्रिथी बताउँछन् ।
‘फारम बुझाउँदा खामबन्दी गरेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ । यसका लागि शिक्षक आफैं उपस्थित हुन पनि आवश्यक छैन । कितावखानाले तोकेको ढाँचामा खामको बाहिर पट्टी नाम, थर, पद र संकेत नम्बर लेखेर हुलाक मार्फत् वा अरु कोही सहयोगी मार्फत् पठाए पनि हुन्छ, त्यसरी पठाएको फारम हेर्दा गल्ती भेटिएका छन्, त्यही गल्तीका कारण पनि कतिपय शिक्षकले फारम नभरेको देखिन्छ ।’ उपनिर्देशक बुढाप्रिथी भन्छन् ।
उनीमात्र नभएर कितावखानाकै दर्ता फाँटका तारादेवी राई पनिले पनि शिक्षकबाट फारममा थुप्रै गल्ती हुने गरेको बताउँछिन् । ‘विवरण समयमा बिवरण बुझाए पनि नमिलाइकन लेख्ने शिक्षकले पनि ५ हजार रुपैंया जरिवाना तिर्ने गरेका छन् ।’ उनी भन्छिन् ।
उनका अनुसार शिक्षकहरुले संकेत नम्बर, जिल्ला, सिटरोल नम्बर र अक्षर नै स्पष्ट नलेख्दा समस्या हुने गरेको छ । ‘हामीलाई समस्यामा पार्छु भन्ने मनसायले फारम भरेका शिक्षकहरु आफैं समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।’ उनी भन्छिन् ।
यतिमात्र नभएर उनी भन्छिन्, ‘फाराम हेरी इन्ट्री गरिरहँदा त कतिपय शिक्षकले कितावखानाले दिएको नम्बर लेख्ुनुपर्नेमा सञ्चयकोषको नम्बर लेख्ने गरेका पनि छन् ।’
शिक्षक किताबखानामा स्थायी शिक्षककोमात्र विवरण संकलन हुने गरेको छ । अस्थायी, करार, राहत शिक्षकको बिवरण भने आफ्नो स्थानीय तह र समन्वय इकाइमा बुझाए पुग्छ ।
कितावखानाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ७२ हजार ५ सय ७ शिक्षकहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाए भने १० हजार २ सय १५ शिक्षकहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन् । विद्यालय शिक्षक कितावखानाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने शिक्षकहरूको प्रतिशत १४ दशमलव २० प्रतिशत रहेको थियो । २०७२/७३ भन्दा २०७३/७४ मा अझ बढेको थियो । ०७२/७३ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने शिक्षकरूको प्रतिशत १२ दशमलव ३५ मात्र रहेको थियो ।
यो वर्षअन्तर्गत समाचार तयार गर्दासम्म मात्र ३८ हजार शिक्षकले सम्पत्ती विवरण भरी पठाएको तथ्यांक इन्ट्री भएको दर्ता शाखाकी राईको भनाइ छ । उनले हुलाकबाट आउनुपर्ने, व्यक्तिगत रुपमा आएको फारम अझ इन्ट्री गर्न नपाएको बताउँदै अझै करिब सोही संख्यामा फारम इन्ट्री गर्न बाँकी रहेको बताइन् ।
फोटो साभार :patan lrc
शिक्षक ‘राहत’ : बन्दले विद्यार्थीमाथि आहत !
तीजको रौनकमा बालबालिका